ज्योति मगर दुई सन्तानकी आमा भएको खुलासा ? अहिले सम्म कसैले थाहा नपाएको गोप्य रहस्य ! – Todays Nepal
ज्योति मगर दुई सन्तानकी आमा भएको खुलासा ? अहिले सम्म कसैले थाहा नपाएको गोप्य रहस्य !
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Dec 23, 2017
बिगत ११ वर्ष देखि कलाकारितामा सक्रिय लोकगायिका ज्योति मगर यतिबेला तीजको गीतको तयारीमा जुटेकी छिन् । लामो समय संघंर्ष गर्दा पनि सफलता नपाएपछि उनलाई ग्ल्यामरस देखिने निहुँमा छाडा भएर चर्चा पाएको आरोप पनि लागेको छ । तर उनले यी सबै कुराहरुलाई सहजै लिने गरेकी छिन् ।
विभिन्न म्युजिक भिडियो र स्टेज कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहने ज्योति अब काठमाण्डौमै घर किन्ने सोचमा पनि पुगेकी छिन् । तर त्यसको लागि केही समय लाग्ने भन्दै उनले अहिले आफ्नो कमाई दुईवटा छोरा पढाउन ठिक्क भएको खुलाईन् । खासमा ज्योतिका दुईवटा छोराको वास्तविकता के हो ? हेर्नुहोस् भिडियोमा ।
लोक संगीतको क्षेत्रमा राम्रा/नराम्रो पक्ष के छन् ?
–लोक गीतको क्षेत्रमा लोक गीतको क्षेत्रमा विमाकुमारी दुरा विष्णु माझीले जस्तै गीत गाउनु पर्छ भन्ने छ । यो भन्दा फरकपन दिन खोज्दा पत्याउनु हुन्न । तर हाम्रो सर्कलमा सहकर्मीहरु एक अर्कोमा आत्मियता छ । लोक क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी सहकार्य छ । त्यो राम्रो पक्ष हो ।
नयाँ कलाकारलाई तपाईको सुझाव ?
म्युजिक भनेको सरस्वतीको पूजा हो । दाम कमाउने कुरा नगर्नुहोस लगनशिता र धैर्यता चाहिन्छ ।
जसरी ज्योती मगरलाई आरोप पनि छ । चर्चामा आउनको लागि गर्छ भन्ने छ । यो गलत छ । सबै कपडा खोल्नेहरु चर्चित पनि छैनन् । सबै कपडा लगाउनेहरु पनि चर्चित छैनन् । कामसँग सरोकार राख्छ । म मेहनेत गर्ने कलाकार हो ।
यी चार राशि भएका मानिसमा हुन्छ अचम्मको क्षमता
‘तीज क्वीन’ चर्चित गायिका सुनिता दुलालसँग लिइएको सेक्स,प्रेम र बिबाह केन्द्रीत…
बिवाह अघि सेक्स गर्नु कुनै पाप होइन, मलाई मेरो आफ्नै स्तन निकै मन पर्छ : प्रिती आले
१० वर्षमा उपचारमा मात्र नेताले ५ अर्ब सके, राजसंस्थाले २५० वर्षमा ८ करोड पनि खर्च…
यस्तो पो माया ! चिकित्सक जोडी : डा. कुञ्जन तथा डा. सञ्जिताको कथा